अहिले पार्कमा जानु, मास्क लगाएर दौडनु र ब्यायाम गर्नु कत्तिको खतरनाक छ ? « Khabarhub
अहिले पार्कमा जानु, मास्क लगाएर दौडनु र ब्यायाम गर्नु कत्तिको खतरनाक छ ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै यसले मानिसको जीवनशैलीमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । पहिले पहिले बिहानउठेर पार्कमा घुम्न जाने हाम्रो दिनचर्याको एक महत्वपुर्ण पाटो हुने गर्दथ्यो ।
तर कोरोनाको महामारी र लकडाउने सबैलाई घरभित्र कैद गर्दा बिहान पार्कमा घुम्ने चाहना सपनामा बदलिएको छ । हुनत अब बिस्तारै लकडाउन खुल्न सक्ला । तर के लकडाउन खुलेपछि बिहानपार्क घुम्न जानु उपयुक्त रहला ? यस बिषयको प्रश्नको जवाफ हामी दिनेछौ ।
१. के यस समयपार्कमा घुम्न जानु उपयुक्त होला?
पार्कमा मर्निङ वाकका लागिहोस् वा घुम्नका लागिजानु अघि यो सुनिश्चित गर्नुहोस् तपाईंको क्षेत्र कोरोना संक्रमणको कतिको जोखिममा छ ? यदितपाई ग्रीन जोनमा हुनुहुन्छ भने पार्कमा जान सकिन्छ । तर त्यहाँ पनि सामाजिक दूरी बनाउन आवश्यक हुन्छ । तथापी यो बेलापार्कमा नजानु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
२. के मास्क लगाएर दौडदा हुन्छ ?
मास्क लगाएर दौडदा स्वास्थ्यकालागि खतरनाक साबित हुन्छ।
मास्क लगाउँदा श्वासमा अक्सिजनको मात्रामा कमि आउन सक्छ जो खतरानाक हुन्छ । चीनमा २६ वर्षीय एक ब्यक्तिमा स्कलगाएर दौडिएकै कारण अस्पताल भर्ना हुनु परेको थियो ।
३. के मास्क लगाएर शारीरिक ब्यायाम गर्नु हानिकारक हुन्छ ?
मास्क लगाएर शारीरिक ब्यायाम गर्नु हानिकारक साबित हुनसक्छ । मास्कले श्वास फेर्नमा बाधा पुर्‍याउने र ब्यायाम गर्दा पर्याप्त अक्सिजन आवश्यक हुने भएकाले यो उपाय गलत साबित हुन्छ ।
तसर्थ यस समयमा घरको खुल्ला क्षेत्र जहाँ पुर्ण सुरक्षित छ त्यस स्थानमा बिनामा ब्यायाम गर्दा हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७७, मंगलबार १० : ५६ बजे